Dad hor leh oo Soomaaliya ugu dhintay Coronavirus iyo kiisaska oo maanta kordhay | Xaysimo
Home War Dad hor leh oo Soomaaliya ugu dhintay Coronavirus iyo kiisaska oo maanta...
Dad hor leh oo Soomaaliya ugu dhintay Coronavirus iyo kiisaska oo maanta kordhay
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo goordhoweyd ka warbixineysay xaalada Coronavirus ee gudaha Soomaaliya, ayaa sheegtay inay kordheen Kiisaska cudurkaasi ee gudaha dalka, halka dad kalena ay maanta u dhinteen Cudurkaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in maanta ay soo korodhay 2-qof oo dhimasho ah, midaasi oo tirada guud ee dhimashada dalka ee cudurkaasi ka dhigaysa 7-qof, halka dadka qaba cudurkaasina ay gaaareen 135-qof, kadib markii maanta ay wasaaradu cudurkaasi ka heshay 19-qof oo cusub.
Wasaarada ayaa maanta baadhay 25-qof, sida ay sheegtay Wasiirada caafimaadku, iyada oo laga helay 19-qof oo kamid ah dadkaasi la baaray.
Shalay unbay aheyd markii ay wasaaradu shaacisay tiradii ugu badneyd ee muddo 24-saacadood gudahood laga helo cudurkaasi, oo la diiwaan-geliyo, maadama 36-ka qof laga helay, kuwaasi oo ka mid ahaa 47 qof oo shalay cudurka laga baaray, waana arrin cabsi muujinaysa ah, iyada oo ta maanta laftigeedu uu sareeyo boqoleeyda dadka laga helay cudurkaasi maadama 25-qof oo la baaray laga helay 19-qof.
Faafitaanka cudurka ee gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa ku socoto mid xowli ah oo u muuqata in uu si weyn ugu dhex faafay cudurka bulshada ku nool gudaha magaalada.